६० वर्षकी बेहुली २० वर्षका बेहुला,आखिर कसरी जुर्यो त बिवाह ? हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > ६० वर्षकी बेहुली २० वर्षका बेहुला,आखिर कसरी जुर्यो त बिवाह ? हेर्नुहोस
admin October 14, 2020 October 14, 2020 Uncategorized	0
एजेन्सी । नेपाली संस्कारमा वेहुला र वेहुलीको उमेरको धेरै अन्तर हुँदैन । प्राय वेहुलीको उमेर सानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा भने उमेरको खासै म*हत्व राखिदैन । बढी उमेरको युवतीसंग पनि विवाह गर्ने था*लनी भएको छ । तर त्यो प्राय प्रेम विवाहमा हुन्छ । तर कहिले काँही यस्तो पनि हुन्छ जुन कुरा विश्वास गर्न पनि मु*स्किल पर्छ । अहिले यस विवाहको चर्चा आसपासका गाउँ मात्र नभई विश्वभर फैलिएको छ । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
करिब १२ बिघाकी धनि ती महिलाको पतिको केहि बर्षअघि निधन भइसकेको छ । उनकी विवाह भइसकेकी छोरी पनि छन् । आमाले २० वर्षका उमेरका युवासंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएर छोरीले निकै वि*रोध गरिन् । यो बिषय प्रहरीकोमा समेत पु*ग्यो । तर महिला र युवकले विवाहमा दुबै पक्षको मञ्जुरी भएको बताएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई कार*बाही गर्न सकेन । उनीहरुले धुमधामले विवाह गरे । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***